Nguva imwe neimwe yandinoshandura dingindira rangu reblog, ndasiya mufananidzo wangu papeji rekutanga. Nguva imwe neimwe pandinoisiya, ndinowana toni yeemail uye makomendi achibvunza kuti aripi! Handimbofi ndakakanganisa zvakare - zvinondifadza kuti yakawanda sei mhinduro uye hunhu zvinounza kunzvimbo. Ini handisi narcissistic neimwe nzira, ndinonetseka nekuisa mafoto angu pachangu pasiti. Nekudaro, ini ndinonyatsoziva kuti zvakaoma sei kuvaka hukama nemunhu wausati wamboona.
Kupfekedzwa kwepamusoro kwakatorwa makore angangoita mana apfuura pandakanga ndichishandira dot com muDenver, Colorado. Ini ndinorema, ndachena musoro uye ndakapfava kupfuura zvandaive mumufananidzo unotyisa uya. Iye mutori wemifananidzo aive neakawanda tarenda! Ipfuti yandicharamba ndichitenderera pane saiti kwenguva yakati rebei. Kunze kwekunge chokwadi ini ndichidzoka muchimiro (kunze kwepea). Ini ndinoseka nevanhu kuti dai ndaifanira kumhanya kana kukwira bhasikoro kuti ndimhanye laptop yangu, ndinenge ndiri Mr. Universe. Chokwadi sainzi inogona kubata nesu kuti itipe hupenyu hwakanaka hwekhibhodi, pizza uye husiku-husiku chirongwa, handiti?
Makorokoto pachigadzirwa chitsva. Yakanaka kwazvo, uye yakachena.
(Uye ikozvino chinongedzo chekushambadzira chinoenda kune yakapfava chinyorwa peji icho chinoti chindiendese kune iro chairo peji. Panzvimbo pezvo rinongoramba richizvirongedzazve iro rega. Icho chinetso cheMac here?)
Yakagadziriswa! Zvaingova chaizvo Anotyisa redirect kodhi yandakanyora uye handina kuyedza.
Hongu. Zvino zvinoshanda. Iwe ungangoda kuwedzera "kwete" mune rako re-rakananga peji 🙂
Kana iro peji rinotakura mushure memasekonzi mashanu, tinya apa.
Chii chandingaite pasina imi varume?! Ndatenda!
kunyangwe iine zita chinja yako "mug" inoita kuti inzwe senzvimbo yakasununguka yekuuya.
Ndatenda, Steven! Ndizvo chaizvo zvandiri kuenda. Vese vanogamuchirwa… kunze kwekureva!
Doug! Kubudirira kukuru!
Ini ndanga ndichizoti 'Dhonza sutu uye udzokere pamufananidzo wakafanana wawanga uine', uye ipapo ndakafunga kwechipiri… pamwe maviri ...
Ok, tinonyatsoda mumwe mukomana ari musutu achitaura nezve tekinoroji uye kushambadzira? KUNYANYA, isu tinonyatsoda kuverenga nezve tekinoroji uye kushambadzira kubva kune inonamira mujuzi (pikicha yekare)?
Saka, chii chatinoita? Tinoda mubatanidzwa wepikicha yekutanga newe uchiseka, uye yechipiri pikicha - asi isina tayi. Iyo yese 'Shamwari / Inonakidza, isina-kuputira, zvakadaro ichiri nyanzvi' kutaridzika uye kunzwa.
Asi hei, iko kufona kwako, uye uchiri x1000 wakashinga kupfuura ini nekushandisa musoro muhotera yako. (Ndiri kuenda kunonamira neyangu yakachengeteka ambigram musoro kusvikira ndadzokorora… zvakare…) 😉
Zvakanaka, ramba uchifunga kuti izvi zvinouya kubva kune mukomana ane katuni yake mumusoro wake, asi saWilliam, ndakafarira iyo "inoseka Doug." Asi kusiyana naWilliam, ini ndoda tekinoroji yangu uye kushambadzira kubva kune slacker mune juzi 🙂
Icho chifananidzo chikuru hazvo, uye iko kutaridzika kwese kunotyisa - crisp, yakachena, asi yakashinga.
Ndiri kuseka mumufananidzo uyu! Kuseka nekuti ini ndoda kuziva kuti yakawanda sei bata iyo ichatora kuti ndiite ndinoratidzika.
Vhoti Yangu: Kuseka Doug.
Vhota izvozvi! 😉
Tony: Ndinoziva bhurogu yako kwazvo izvozvi - yako iri KUSHANDISWA sezvatinotaura naRobert Hruzek (middleszonemusings.com)! Nezve iri nyore basa sekuita iyi yaive! (inofanira kunge iri mwedzi wakanaka muindasitiri yekurapa)
Ndakawana chinhu chimwe chete kubva pamufananidzo wekati yangu. 🙂
Inosvika rinhi chinzvimbo chechitendero?
engtech, izvo zvinonakidza!
Handina katsi. Ndine Jack Russell anonzi Cooper uye ndinovhima nekuuraya katsi dzese idzodzo. 🙁
kutaura kwese uku kwekunyemwerera kumeso nekitsi kwakasvika kwandiri saka ndakafunga kuwedzera padivi widget yeWinExtra mascot ingangoita hafu yekudzika neLOL .. damn you guys for all this warm and fuzzy stuff 🙂